Ezemidlalo nokuPhepha, Ubuciko bokulwa
I-American boxing boxing kuyinto izwe elikhethekile eligcwele izinkanyezi eziqhakazile namathalenta langempela. Ukulwa kwabo kuyaqhakazile futhi kujabulisa, izilaleli ziyabathanda ngokoqobo futhi zibheke phambili ukulwa nokuhlanganyela kwazo. Omunye walaba fighters abanobuhlakani ngempela u-André Ward - umbhokisi obhekene nesimo sakhe sebizo sizocatshangelwa kulesi sihloko.
"INdodana kaNkulunkulu" (lena igama lomdlali ongeyindandatho) yazalwa ngoFebhuwari 23, 1984 emndenini wesigodi esivela e-Ireland Frank kanye nomdabu waseMelika waseMelika uMadlney. Ngeshwa, u-Andre Ward owayesemuva ebusheni bakhe ebusweni bakhe wabona abazali bakhe behluleka kakhulu ukuhlala emndenini: lo mbhangqwana wasebenzisa izidakamizwa, ngakho-ke ube nezinkinga ngomthetho. Ngezindlela eziningi, ngobuntwana bakhe obunzima, iqhawe lamanje lichaza ukuthi kukhona izimfanelo zakhe ezinamandla.
UBosterer Andre Ward waqala umsebenzi wakhe wezemidlalo ngenxa ka-godfather wakhe, okwamanje uqhuba ukuqeqeshwa naye futhi uhlala ekhoneni lompi ngesikhathi sokulwa.
Ngomsebenzi wakhe we-amateur, ama-ward angu-119 alwa nabaphikisi futhi izikhathi ezine kuphela wafunda ubuhlungu bokunqotshwa. Ukuphakama kwenkulumo yama-amateur kungabhekwa njengama-Olimpiki ka-2004, lapho inqola engabonakali ekunqobeni kuyo yonke imidlalo yakhe futhi ithola umklomelo wegolide wemincintiswano ehlonishwa kakhulu emhlabeni. Ngaphambi kwalokhu, umbhokisi wesibhakela u-Andre Ward usebe yingxenye yezwe lakhe kathathu ngezigaba ezahlukene.
Debut in pro
Ngesikhathi sokuqala lo mqhudelwano wangena emgqeni njengochwepheshe ngoDisemba 2004 ngokumelene noChris Molina. I-duel yokuqala ye-American iphumelele - uMolina waxoshwa ngomzuzu wesibili. Emva kwalokhu, kulandela ukulwa okuyisihlanu okuphumelelayo, lapho iWadi ngaphandle kwezinkinga zaphinda zibulele abaphikisana naye.
Nokho, empini yakhe eyisikhombisa, umphathi webhokisi u-Andre Ward okokuqala ngqá empilweni yakhe wagwetshwa ngemuva kwesiteleka esingekho esivela kuDarnell Boon. Kodwa ekugcineni, u-Andre wakwazi ukuqoqa amandla futhi anqobe le mpi kumaphuzu.
Uchungechunge lwezinqola lwaholela ekutheni iWadi ehlobo ka-2008 yangena emgodini wokulwa noGerson Ravelo weBhande le-WBO NABO. I-duel iphelile ngokuthi ekhoneni lesishiyagalombili uRavello waphonsa ithawula, no-Andre waba yiqhawe elisha.
Isihloko sokuqala esiyingozi - I-WBA - American inqobile nge-duel noDane Mikkel Kessler. Le mpi yenzeke e-Oakland ngaphansi kwesiteleka se-Super Six middleweights. IWadi eyengeziwe yahlula u-Allan Green, uSakio Bika, u-Arthur Abraham, futhi waphinda waya empini yokulwa.
NgoDisemba 17, 2011 ekulweni nombhishobhi waseBrithani uCarl Froch, umAmerica unqobe isinqumo somshushisi ngesibhande se-WBC kanye nesihloko esingenamsebenzi seThe Ring futhi, ngaleyo ndlela, saba yiyona engcono kakhulu kwi-Super Six World Boxing Classic.
Ngaphezu kwalokho, kwaba nokuzivikela ngokuphumelelayo kwamabhande e-duel noChada Dawson, owayesehlulwe izikhathi ezintathu zokulwa.
Ukuguqulwa kuya kwesisindo esikhulu
Ukulwa kokuqala esigabeni esisisindo se-Ward esibhekene nomdlali we-WBO we-intercontinental uSullivan Barrera. Impi yaqala ngenkuthalo, futhi emjikelezweni wesithathu iCuban yavakashela ingubo emva kwesokunxele kwesokunxele ukusuka eMelika. Ngaphezu kwalokho, u-André ubuye waba nenzuzo futhi ngenxa yalokho waphumelela ngokuwina emaphunjini, nakuba engabonisi kahle ibhokisi lokukhwabanisa, njengoba lithinta isikhathi eside esilula.
NgoNovemba 19, 2016 u-Andre Ward (biography, umndeni wombhokisi webhokisi ohlolwe kulesi sihloko) walwa nokungahlehlisi ngaleso sikhathi umqeqeshi waseRussia uSergei Kovalev. Le mpi yayimangalisa kakhulu, kanti iMelika okwesibili empilweni yakhe yawela phansi, yalahlekelwa isifo esiqinile "Umbhubhisi" emjikelezweni wesibili. Izindandatho ezalandela zenzeka ngesitayela esijwayelekile seWadi: wayekude kakhulu futhi wasebenza kakhulu nge-jabs, kuyilapho uSergei eqhubeka futhi esebenza ngendlela enamandla. Ekupheleni kwayo yonke imijikelezo engu-12, bonke abahluleli banikela ama-American ngokulinganayo amaphuzu afanayo ka 114: 113. Lesi sinqumo sasiyinkinga enkulu, ochwepheshe abaningi nabalandeli bebhola babengajabuli kakhulu nabo.
Ukulwa Kovalev wathola amaRandi amabili wezigidi, no-Andre - izigidi eziyisihlanu. Ngesisekelo sesivumelwano esayinwe ngaphambi kokulwa, iWard inesibopho sokunikeza uSergey i-rematch, okuzophinde ibe enye yezinto ezikulindeleke kakhulu ngonyaka ozayo.
Ekuphetheni, siyaqaphela ukuthi u-Andre Ward - umbhokisi wezincwadi owaziwa emhlabeni wonke nomuntu omndeni omangalisayo. Ngomkakhe, ujwayele isikole futhi ukhulisa nezingane zakhe ezine.
UVasiliy Zhirov: indlela yokuphila, impumelelo yezemidlalo
Chris Byrd. Umlando wokuphila
Banebhentshi ngoba egalaji ngezandla zakhe
EMoscow kwentsha yaseshashalazini: umlando, repertoire, Regional Theatre for Ezentsha
Yini ongayinika intombazane ngosuku lokuqala, ngakho wayethanda?
Ukondla ingane ngesikhathi 6 izinyanga. ukwethula ukudla aphelele
Isethi elikhulu "Lego" emhlabeni
Indlela yokwenza ladybug (application)?
Isigodi saseViñales kanye nesimo sayo sokumisa
Imali Ye-Ireland: kusuka ku-pound kuya kwe-euro